Nofoanako ny fanaovana tatitra momba ny tranokala lafo vidy sy ny fitaovana fandinihana an'i Diib | Martech Zone
Miaraka amin'ny vola miditra very mifandraika amin'ny COVID-19, tena tsy maintsy nodinihiko indray ireo vokatra izay ampiasaiko amin'ny fikarohana, fanaraha-maso, fitaterana ary fanatsarana ny tranokalako sy ireo an'ny mpanjifako. Nandany dolara an-jatony isam-bolana niaraka tamin'ny fitaovana vitsivitsy aho hanaovana an'io. Ary koa, ny fitaovana tsirairay avy dia nisy tatitra sy safidy an-taonina maro - saingy tsy maintsy nivezivezy tamin'ny alàlan'ny angon-drakitra aho mba hahitako torohevitra azo ampiharina izay azoko ampiasaina hanatsarana ireo tranonkala.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, nandoa vola iray taonina aho… ary tsy tena nahazo ny valiny ilaiko. Nihomehy momba an'io aho taloha… fa tena marina ny fitaovan'ny analytics fanontaniana motera ary tsia valiny milina. Miankina aminao amin'ny maha mpandalina anao ny mamantatra sy manao ny laharam-pahamehana ireo fotoana aorian'ny handalinanao ny angona, ny fizarana, ny sivana ary ny fampitahana ny fihetsiky ny mpitsidika.
Te-hivoatra aho rehefa mamaritra ity vokatra hitako ity - diib. Misy zavatra an'arivony maro azonao atao amin'ny tranokala hanatsarana ny fahitana azy, ny fitomboany ary ny fiovam-pony. Ny sasany amin'ny famakafakana dia mitaky olona iray handika ny angon-drakitra hatrany amin'ny hetsika.
Diib: ny motera mpamaly
Ity horonantsary avy amin'ny diib rehefa nanomboka 5 taona lasa izy ireo dia manome fahitana kely momba ilay sehatra sy ny fomba hanampiany ny orinasanao:
Nisoratra anarana maimaim-poana aho diib kaonty ary nahagaga anao avy hatrany ny valiny manan-tsaina efa natolotr'ilay sehatra tao anatin'ny minitra vitsy taorian'ny fisoratana anarana. diib manomboka amin'ny famakafakana ny tranokalanao sy ny famantarana ireo fotoana lehibe indrindra hampitomboana ny varotrao. Mizara efatra vahaolana lehibe i Diib:
Masinera mpamaly - fitaovana diagnostika mahery vaika dia hanitsy ny tranokalanao ary hanana drafitra fitomboana namboarina amin'ny fanomezana anao fotsiny ny valiny.
Analytics - diib tsy mandrefy angona fotsiny fa manova azy ireo ho sandan'ny dolara tena izy ho an'ny orinasanao taloha, ankehitriny ary ho avy. Azonao atao ihany koa ny mahita ny fomba fitehirizanao ao amin'ny orinasao.
Tracker amin'ny fandrosoana - Araho ny ezaka sy fianaranao rehetra mba hahitanao ny halaviranao! Arakaraka ny ahitanao ny fandrosoana no handehananao hatrany!
Learning Library - Raha mpivarotra ho azy ianao, Diib koa dia manana torohevitra, fitaovana ary fampianarana ao an-tananao. Manana tranomboky video, lahatsoratra, taratasy fotsy ary ebook 1000 be izy ireo.
Diib manolotra famakafakana, tatitra, ary sary tsotra, izay misy fiantraikany be, hampahafantatra anao ny fomba fanaonao sy ny zavatra hataonao manaraka. Fantatrao amin'ny diib ™ ny sanda isan-taona an'ny tranokalanao sy ny fahombiazan'ny orinasanao amin'ny Internet eo amin'ny sehatry ny asanao. Ary diib dia mamorona drafitra fitomboana manokana ho an'ny orinasanao amin'ny Internet.
Zahao ny fahasalaman'ny tranonkalanao
Ivon'ny tatitra dia ny fanamarinana voalohany fa salama ny tranonkalanao. Diib manao izany amin'ny alàlan'ny famakafakana ireo lafin-javatra fototra ao amin'ny tranokala salama:
SSL Certificate: Mety tsy manana tranokala azo antoka ianao na tsy napetraka tsara ny taratasinao SSL. DiibNy motera scanning dia somary mifantina raha resaka fiarovana no hampandre anao raha mahita lesoka izay lehibe manan-danja izy ireo na mety hisy fiatraikany amin'ny filaharanao na hiteraka fanairana ao amin'ny tranonkalan'ny mpitsidika.
Hafainganana finday: Manamarina ny hafainganam-pandehan'ny findainao isan'andro ny motera mpamaly Raha misy olana amin'ny hafainganan'ny findainao dia ny Diib hanaitra anao.
Domain Authority / Backlinks: Ireo kisarisary ireo dia milaza aminao ny momba anao Moz Domain Authority amin'izao fotoana izao sy ny isan'ny backlinks manondro ny tranokalanao. Azonao atao ihany koa ny mahita ny lisitr'ireo backlinks manan-danja indrindra anao.
Facebook / Google My Business Sync: raha mbola tsy namboarinao ireto loharanom-pahalalana roa lehibe ireto, Diib hampandre anao amin'izay tsy ho diso anjara amin'ny tanjona sy fanairana lehibe ianao!
Sitemap: Ity scan ity dia milaza aminao raha nahita sitemap ho an'ny tranonkalanao izahay na tsia. Ny sitemaps dia manampy an'i Google sy ny motera fikarohana hafa mandady ny tranonkalanao.
Keywords: Ity dia milaza aminao hoe firy ny teny lakile nataon'ny tranokalanao tao amin'ny google. Afaka mahita hatramin'ny 150 amin'ireo teny lakile ilaina indrindra ianao.
lisitra mainty: Ity dia tranokala sy adiresy adiresy IP izay milaza aminao raha alefa any amin'ireo boatin-kafatrao ny mailakao. raha diib mahatsikaritra fa ny mailakao dia mety mankany amin'ny boaty spam fa tsy inboxes dia hampandre anao izy ireo ary hanampy anao hanitsy ny olana.
Tanjona fikarohana, sosialy, finday ary eo an-toerana
Vantany vao nanangana ny tranokalako aho, diib dia nifandray tamin'ny Google Analytics, Google Business, ary Facebook mba hanomezana hevi-baovao momba ny fikarohana, sosialy, finday ary eo an-toerana. Tonga dia namantatra tanjona sasantsasany ho ahy ny sehatra hodinihiko miaraka amina rohy mahafinaritra hahafantarako ny fomba:
Diib nanadihady ny fomba fijerin'ny Facebook hahalalana hoe rahoviana no hisy fiantraikany lehibe ny lahatsoratro.
Diib nanana tsiambaratelo naneho ahy fa tsy nisy fiatraikany amin'ny fifamoivoizana an-tranonkala ny COVID-19.
Diib namantatra rohy tapaka anatiny sasany hanitsiana ahy.
Diib dia nanondro ireo rohy miverimberina izay mety misy poizina mety tiako tsy ekena.
Diib dia soatoavina miavaka
Hilaza ireo purist fa tsy ampy ny fitaovana toy izao. Mety marina izany ho an'ny sehatra lehibe sy sarotra amin'ny indostria mifaninana be. Saingy ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy miasa amin'izay ilana hijerena ny lafiny rehetra amin'ny fisian'izy ireo amin'ny Internet… sahirana izy ireo mitantana ny orinasany.
Ho an'ny vola lany amin'ny diib, ny sandany mihoatra lavitra noho ny ankamaroan'ny sehatra any. Fanaraha-maso ara-pahasalamana, tombam-bidy, vinavina, tanjona ary fampandrenesana izany no hahatonga ny tompon-tranonkala antonony ho be atao mandritra ny herintaona hanatsarana ny fitomboan'ny tranonkalany sy ny fitomboan'ny orinasan'izy ireo.
Manome kaonty diib maimaim-poana:
Drafitra fitomboana voafetra - Fahazoana voafetra ny fanairana isan'andro amin'ny saina sy tanjona izay mampiseho aminao ny fomba hampitomboana haingana ny fifamoivoizana sy ny vola miditra.
Website Monitoring - Makà fampandrenesana momba ny fidinan'ny fifamoivoizana tsy mahazatra, ny backlinks tapaka na spammy, ny olana momba ny fahombiazana, ny fiarovana, na koa ny fanavaozana algorithma fikarohana Google! Ny fampandrenesana tsirairay dia misy dingana azo raisina mba hamahana ilay olana.
Mailaka Snapshot isan-kerinandro - Fantaro hatrany ny momba ny fahafaha-mitombo sy ny olana mety hitranga.
Isa ara-pahasalamana isan'andro - Algorithma mahay an'i diib dia mandinika ny toetran'ny tranonkalanao amin'ny fotoana tena izy.
benchmarking - fampitahana ny zava-bitan'ny tranonkalanao amin'ireo tranonkala mitovy amin'izany amin'ny indostriao.
Ny kaonty diib Pro dia mitentina $ 19.99– $ 29.99 / volana miankina amin'ny fivezivezena amin'ny tranokala ary manome ny zava-drehetra ao amin'ny kaonty maimaim-poana, ary koa:
Drafitra fitomboana - Fahazoana miditra amin'ny fanairana isan'andro sy tanjona hanoro anao ny fomba hampitomboana haingana ny fifamoivoizana sy ny vola miditra.
Tranonkala hatramin'ny 30 - Jereo hoe manao ahoana ny tranokalanao rehetra amin'ny efijery iray.
Fanampiana matihanina amin'ny fotoana rehetra - fidirana 24/7 maimaimpoana amin'ny manam-pahaizana manokana momba ny fitomboana.
haino aman-jery sosialy - Diib dia manara-maso ny zava-bitao marina ary manome anao tondrozotra manokana hampitomboana ity fantsona tena lehibe ity.
SEO & teny lakile - Soso-kevitra momba ny fanadihadiana sy fanatsarana miorina amin'ny Moz & premium Semrush tahirin-kevitra.
Zahao izao ny fahasalaman'ny tranonkalanao!
Fambara: mpiara-miasa mirehareha aminay diib.
Tags: motera mpamalyCovid-19diibfanadihadiana googleGoogle Analyticsgoogle ny orinasakolisitra maintyanalytics amin'ny findayhafainganam-pandeha findayanalytics fikarohanafanadihadiana ara-tsosialySSLfanaraha-maso tranokalatranonkala fanatsarana